3 हाम्रो उबन्टु को लागी XNUMX सुरुचिपूर्ण विषयवस्तु Ubunlog
हाम्रो उबन्टु को लागीeसुरुचिपूर्ण विषयवस्तु
निजीकरण धेरैका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, वास्तवमा धेरै प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो वितरण वा उबुन्टुलाई अनुकूलन गर्न र प्राथमिक कार्यहरू जस्तै युट्यूब हेर्ने, लिबर अफिसमा लेख्ने वा संगीत सुन्नुको सट्टा प्रोग्रामिंग वा विश्वको सर्वश्रेष्ठ कर्नेल भएको भन्दा बढी प्राथमिकता लिन रुचाउँछन्। । यसको लागि मैले चयन गरेको छु हामी टर्मिनलको टचमा स्थापना गर्न सक्छौं कि तीन सुरुचिपूर्ण विषयवस्तु र तिनीहरूलाई हाम्रो सामान्य सेटिंग्समा लागू गर्नुहोस्।
यी तीन रमणीय थिमहरू हुन् मैले मेरो स्वादको लागि छनौट गरेको छु र लोकप्रियता, यद्यपि निश्चित रूपमा यसको मतलब यो होइन कि मेरो मापदण्ड तपाईंको हुनुपर्दछ, यसको विपरितमा, विचारको अधिक विविधता राम्रो। त्यसोभए तपाईको विचारमा टिप्पणी गर्न हिचकिचाउनुहोस्। थप रूपमा, यस अवस्थामा मैले स्थापनाहरूको लागि बाह्य रिपोजिटरी मार्ग चयन गरेको छु, अधिक व्यावहारिक तरिका किनकि यसले हामीलाई विषयवस्तु अपडेट गर्न अनुमति दिनेछ जब सर्जकले यसलाई अपडेट गर्दछ र अन्यथा हामीले यसलाई हातैले गर्नुपर्दछ। त्यसैले हामीले यसलाई प्रयोग गर्न टर्मिनल खोल्नु पर्छ।
1 Numix थिम
2 कागज सामग्री डिजाइन
3 आर्क थिम
4 सुरुचिपूर्ण विषयवस्तुहरूमा निष्कर्ष
हामीले पहिले नै यस विषयमा धेरै पटक कुरा गरिसकेका छौं, तर फरक स्थापनाको साथ। यस अवस्थामा भण्डार उपयुक्त छ जिनोम, एकता, ओपनबक्स, Phanteom र Xfce संग वा उस्तै के हो, न्यूमिक्स थीम उबन्टुको लगभग सबै स्वादहरू सँग प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले GTK लाइब्रेरीहरू प्रयोग गर्दछ त्यसैले हामी यसलाई कुबन्टुमा स्थापना गर्न सक्षम हुनेछैनौं। यसलाई स्थापना गर्न, टर्मिनलमा हामी निम्न लेख्छौं:
कागज सामग्री डिजाइन
जस्तो कि यसको नामले सts्केत गर्दछ, कागज सामग्री डिजाइन प्रेरित छ गुगल र एन्ड्रोइडको सामग्री डिजाइन, एक विषय जुन धेरै लोकप्रिय छ र उबुन्टुको अनुकूलन रोचक छ। यस बाहेक यो रमणीय विषयवस्तु हो लगभग सबै उबन्टु स्वादहरूको साथ उपयुक्त साथै दालचिनी र लिनक्स टकसालको साथ। यदि तपाईंलाई स्थापना मनपर्‍यो भने यो हो:
यस रमणीय विषयवस्तुले मलाई विन्डोज १० को धेरै सम्झना दिलाउँदछ, यद्यपि यसको भिन्नताहरू र भाइरस बिना नै। यो रमाईलो र सुन्दर छ, यसैले यस सूचीमा मेरो समावेश। साथै, यसको आईकनहरू अन्य विषयहरूमा जस्तै धेरै साधारण वा धेरै रंगीन छैनन्। अघिल्लो भन्दा फरक, आर्क थिम MATE को साथ उपयुक्त छ र उबन्टुमा रहेका बाँकी स्वादहरू र डेस्कटपहरू। यो अवस्था मा कुनै रिपोजिटरी चाहिन्छ तर तपाइँ जानु पर्छ यो वेब र डिब प्याकेज डाउनलोड गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई आवश्यक सबै कुरा स्थापना गर्दछ।
सुरुचिपूर्ण विषयवस्तुहरूमा निष्कर्ष
उबन्टुमा कस्टमाइजेसन धेरै नै छ, यो अनुकूलन जुन हामीले यो लेखमा मैले गरे अनुसार रोज्न सक्छौं। तपाईंले देख्नु भएको छ, यी तीन रमणीय विषयवस्तु सुन्दर छन् तर ती तपाईंको स्वादमा नहुन सक्छन्, म त्यसलाई तपाईंको छनौटमा छोडिदिन्छु, तर यदि तपाईं रिपोजिटरीलाई धन्यवाद अपडेट गर्ने सुन्दर थिमहरू चाहनुहुन्छ भने, यी थिमहरू एक राम्रो विकल्प हो, डान तिमीलाई लाग्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » ट्यूटोरियलहरू » हाम्रो उबन्टु को लागीeसुरुचिपूर्ण विषयवस्तु
जेफरसन Argueta हर्नान्डेज भन्यो
के तिनीहरू उबुन्टु १२.०12.04 मा काम गर्छन्?
Jeferson Argueta Hernandez लाई जवाफ दिनुहोस्
के उनीहरु उबन्टु १२.०? मा काम गर्छन्? : 'D
जेफलाई जवाफ दिनुहोस्
र तल पट्टी? म अन्य फ्लैट आइकनहरू कसरी राख्ने?
बेलियल एल्डर पान भन्यो
मेरो हालको अनुकूलन 🙂
Belial Elder Pan को जवाफ दिनुहोस्
म ग्यास्ट्रोनमी र टेक्नोलोजीको प्रेमी हुँ। म 66 XNUMX बर्षको भएँ र मसँग पीसी, ट्याबलेट, फोनहरू क्लच गर्न समय छ। म मेरो पीसी रेसिपीहरू डाउनलोड गर्न, भिडियोहरू हेर्न, र अध्ययन गर्न प्रयोग गर्दछु।
विन्डोज र यसको भाइरसहरूबाट सed्गतित भएर मैले लिनक्स प्रयास गर्ने निर्णय गरें। म स्वीकार गर्छु कि यो सजिलो भएको छैन, मैले अध्ययन र अध्ययन गर्नुपर्‍यो। र यति धेरै सफलता र त्रुटि पछि, म उसलाई माया गर्न थाल्छ।
मैले धेरै लामो यात्रा गर्नुपर्दछ, म प्रोग्रामर वा सिस्टम इञ्जिनियर होइन, तर मलाई चुनौतीहरू मनपर्छ। मैले लिनक्स छोडेको छैन र म यसलाई मेरो आवश्यकता र स्वादमा समायोजित गर्दैछु, तपाईं जस्ता व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद, जसले हामीलाई यस साइबरनेटिक मार्गबाट ​​यात्रा गर्न मद्दत गर्छन्।
Cheffina लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार! जानकारी को लागी धेरै धन्यबाद !! मैले numx को थिम स्थापना गरें तर यो राखिएको छैन ... म कसरी यसलाई समाधान गर्न सक्छु?
ओस्कर लुइस मेजिया र पेरेज भन्यो
तिनीहरूलाई UBUNTU 21.10 मा स्थापना गर्ने प्रयास गरियो र यसले स्थापना गर्दैन, कुनै पनि विषयवस्तुहरू छैनन्।
Oscar Luis Mejía र Pérez लाई जवाफ दिनुहोस्
उबुन्टु र यसको आधिकारिक स्वादहरू पाउनुहोस्
नि: शुल्क प्ले ० एडी अल्फा १ Syl सिलेप्सिस संस्करणमा आउँदछ